बार्सिलोना फर्किने प्रयास गर्दैछन् नेइमार, आफ्ना एजेन्टलाई कुरा गर्न पठाए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। पेरिस सेन्ट जर्मनका स्टार स्ट्राइकर नेइमार पिएसजीमा आफ्नो भविष्य नदेख्दा चिन्तित छन् । यस सिजनमा भविष्य खोज्न अर्को ठूलो क्लव जाने योजना बनाएका उनी स्पेन फर्कन चाहन्छन् । स्पेनमा उनलाई ल्याउन रियल मड्रिडले चासो देखाएको छ । तर नेइमार स्वयं भने बार्सिलोनामै फर्कन चाहन्छन् । २ वर्षअघि बार्सिलोनाबाटै पिएसजी गएका उनलाई बार्सा छाडेकोमा पछुतो भएको बताइएको छ ।
नेइमार बार्सा छाडेर पिएसजी जाँदा बार्सा खुसी थिएन । यो कारणले बार्सा र पिएसजीबीचको सम्बन्ध समेत राम्रो छेन । यति हुँदाहुँदै पनि नेइमार भने बार्सा फर्कने कायमै राखेका छन् । उनले आफ्नो बार्सा फर्कने वातावरण सहज बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिलाई कुरा गर्न सकेत पठाएको समाचार आएको छ । ग्रुप १४ का अनुसार नेइमारका प्रतिनिधिले उनको सम्भावित बार्सा फिर्तिबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
बार्सिलोनामा निर्देशकहरुमध्येका एक पेप सेगुराले हालै एक अन्तरवार्तामा नेइमारको सम्भावित फिर्ताबारे कुरा गरे । उनले अन्तरवार्तामा नेइमार फर्कन सक्ने सम्भावनालाई नकारेका छैनन् । ‘बजारमा भएका सबै खेलाडीहरु हामीकहाँ आउन सक्छन्, यदि उनीहरु हाम्रो आवश्यकतामा फिट हुन्छन्’ उनले भने ‘आजको मितिमा नेइमार बजारमा छैनन् ।’ उनले नेइमार पिएसजीमा अनुबन्धित भएकोले उनी बजारमा उपलब्ध नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।
‘यदि कुनै दिन उनी उपलब्ध भए र हामीलाई आवश्यकता पर्यो भने बार्सिलोनाजस्तो क्लवले यसबारे नसोच्ला र ?’ उनले थपे ‘यस्तो अवस्थामा नेइमार वा अन्य कुनै पनि खेलाडी होस् हामीले हाम्रो खेलाडीलाई सबैभन्दा राम्रो विकल्प दिनुपर्छ ।’ यदि नेइमार फ्रेन्च च्याम्पियन पिएसजीबाट छुट्टिए पनि उनको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने बताइएको छ । यद्यपि स्पेनकै अर्को क्लव रियल मड्रिडले पनि उनलाई ल्याउन चासो देखाइरहेको बताइएको छ ।